umnyango embossing umshini
Lo mshini ikakhulukazi ulungele umnyango wensimbi oqoshiwe. Imishini ine-rigidity enhle yohlelo nokunemba okuphezulu, impilo ephezulu nokuthembeka okuphezulu. Inqubo embossing for sheet metal izingxenye ihlangabezana 3 amashifu / ukukhiqizwa day ..
I-pan engapheli yokufaka umshini wokubacindezela we-hydraulic
I-5000T ebandayo ekwakheni umshini wokubacindezela, ikakhulukazi esetshenziselwa imbiza engezansi yokungeniswa, imbiza engeyona induku. Ngaphansi kwengcindezi, cindezela izinsimbi ezimbili ndawonye. Ibhodwe elinezitezi ezimbili lixhumana nongqimba womthombo wokushisa futhi lidlulisela ukushisa ngokushesha, okungenza umfaniswano wokusabalalisa ukushisa namazinga okushisa. Ungqimba ngaphakathi ebhodweni lubushelelezi, luyamelana nokugqoka, akulula ukugqwala, futhi ngeke lukhiqize izinto eziyingozi empilweni yomuntu